Publié mai 11, 2019 par Book News
Tsy mijanona amin’ny tontolo ara-panahy ihany ny Fiangonana Advantista fa mijery ihany koa ny lafiny ara-batana sy ny saina. Hotanterahina ny herinandro ho avy izao ny hetsika Expo-Santé.
Mikarakara ny hetsika « Expo-Santé » ny Fiangonana Advantista. Eo amin’ny tokotaniben’ny Lapan’ny Tanàna no hanatanterahina izany ny Alatsinainy 13 May ka hatramin’ny Talata 14 May izao, manomboka amin’ny 8 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora hariva.
“Antananarivo salama », io no lohahevitra amin’izao hetsika ara-pahasalamana izao. Tanjon’ny Fiangonana advantista amin’ity hetsika ity ny hanasoavana ny mpiara-belona araka ny baikon’i Jesosy sy araka ny vinan’ny Fitondram-panjakana malagasy, dia ny fanomezana maimaim-poana hoan’ny vahoaka Malagasy.
Nampahafantarina ny mpanao gazety ny hetsika. cc : Toria Dimbiniaina
Misokatra hoan’ny rehetra ary maimaim-poana avokoa araka izany ny tolotra hita ao amin’ity “Expo-Santé » ity.
Maro ireo tolotra hita mandritra ity « Expo-Santé » ity toa ny fijerena ny tahan’ny rano ao amin’ny vatan’ny olona iray mitaha amin’ny lanjany, halavany, taonany, ary amin’ny maha-lahy na maha-vavy azy.
Hisy ihany koa ny fijerena ny tosi-drà sy ny tahan’ny siramamy ao amin’ny vatana. Tsy adino ihany koa ny torohevitra fampiasana ireo fanafody valo maimaim-poana avy amin’Andriamanitra.
Anisan’ny zava-dehibe amin’ity hetsika ara-pahasalamana ity ny fizahanam-pahasalamana maimaim-poana ataon’ireo “Médecins spécialistes- Médecins généralistes- Paramed” mikasika ny : fahasalaman’ny fo, ny lalan-drà,ny fahasalaman’ny reny , fahasalaman’ny zaza, vehivavy, areti-koditra, fizahana maso, famorana zaza, dépistage diabète, dépistage otrik’aretina VIH ary ny torohevitra ara-pahasalamana.
Ankoatra izay dia hisy ny fampirantiana sakafo ara-pahasalamana sy ny fampirantiana boky mirakitra torohevitra ara-pahasalamana.
Tsara ny manamarika fa efa maro ireo hetsika momba ny fahasalamana toy izao any amin’ny fokontany isanisany mba hitandrovana hatrany ny fahasalaman’ny mpiara-belona.
Publié dans Social et Uncategorized